Muviri mafuta muzana karukureta
Muviri mafuta muzana karukureta anobvumira kuti ngaaverenge parameters siyana dzomuviri wako, akadai yenyu yakanaka uremu, muviri mafuta uye muviri mafuta muzana, uremu pasina mafuta, muviri chimiro mhando, basal kugayiwa kwezvokudya, uremu kugayiwa kwezvokudya uye nezvimwe. It anoti kwakavakirwa wako pabonde, zera, uremu, hukuru muviri uye basa pamwero.
Sex: Chikadzi Mukono
Kuzorora mwoyo rate:
Vakaverenga sezvo avhareji 3-5 kuyerwa uwandu mwoyo anorova paminiti mangwanani pashure akarara pamubhedha.
Chiuno (mu thinnest pfungwa):
Kazhinji, izvi ndizvo nzvimbo kumusoro kweguvhu.
Muhudyu (the widest chikamu):
Tambanudzira ruoko rwako zvaivapowo pasi. Vanokunga wako asati ruoko 90 dhigirii kuitira kuti honokono wako perpendicular pasi. Shandisa thumbs munwe uye forefinger romumwe ruoko uyere chinhambwe pakati mapfupa. Uyere ruoko kure (pakati thumbs wako munwe uye forefinger) aine chikero riri rako kugokora pahupamhi.
Tsanangurai kwenyu mararamiro basa pamwero.
ndakagara basa chiedza basa avhareji basa zvakanaka basa kunonyanyisa basa
Tsanangurai chinangwa yemabasa zvemitambo.
kuwana zvakanaka muviri chimiro Kuonda kuwedzera figa mitambo muviri nharo mitambo
Weight Calculator kuchaita ngaaverenge dzakanakira muviri uremu uye bumbiro: kubudikidza yokuita Quetelet, Brock, Solovyov indekisi. Mafuta yaunodya.
Online mafuta pakaunda
Vangani macalorie iwe kupisa (tichiregeredza macalorie) Achimhanya, achifamba, kushambira, uye zvichingodaro.
Yakanaka uremu Calculator
Change yakanaka muviri uremu vakadzi nevarume vari kutsamira nezera rako, kukwirira uye muviri mhando.
Change muviri wako chimiro uye muviri mhando, wako yakanaka uremu, muviri mafuta uye muviri mafuta muzana, wako kugayiwa kwezvokudya pamwero uye nezvimwe.